Goolasha Haweenka: Hoe U U Concurrenten Uitziet In E-Ganacsiga Bedrijf
Adiga oo iibiya eCommerce, waa in aad adigu iska ilaaliso tartanka. Waa maxay sababta? Marka hore, waxay kaa caawineysaa inaad fahamto jihada suuqa. Marka labaad, waxaad ka warqabtaa waxyaabaha marka ay timaado abuurista suuq geyntaololaha iyo dabcan, waxay kaa caawineysaa inaad kala gedisid ganacsigaaga ganacsiyada tartanka.
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, Jason Adler, khabiirka Sare Adeegyada Digital, waxay ku siinaysaa talooyin ku saabsan sida loo kormeerayo booska tartankaaga - trade rent for services.
Ku bilaw SEO
Samee koox si aad ula socoto xeeladaha SEO ee aad tartamayaasha isticmaalayso. Soo hel Tirada xiriirka dambe ee ay leeyihiin oo ay ku jiraan barashada bogagga internetka ee ay ku xiran yihiin. Markaad heshay xogtan, u soo dhawow websaydhkaagaxiriiriyaasha isutaaga iyo in aad aragto haddii aad kaashan kartid tikidhadaas iyaga oo dukaanka kuugu jira.
Tusaalahan tusaalahan. Mar kasta oo aan raadinayo xiriirka macaamiisheena, aniga aqoonsadaan macaamiisha 'tartameedyada' iyadoo la isticmaalayo 'Analyteth Analyteth' Waxay isticmaashaa 'Open Site Explorer' si loo soo uruuriyo dhammaan shabakadaha ay (tartamayaasha) ku xiran yihiin. Ka dib marka la ururiyo xogtan muhiimka ah, waxaan baarayaa inaan dib u codsado xiriirka iyo wax kasta oo kale oo loo baahan yahay si loo fuliyo qorshaha.
Eeg warbaahinta bulshada ee tartanka
Waa inaad sidoo kale daawataa warbaahintaada warbaahinta bulshada si ay u aqoonsadaan content istaraatijiyada maamulka. Waxaa jira codsi la yaab leh oo la yiraahdo FollowerWonk kaas oo kuu ogolaanaya inaad hubiso cidda ku xigta Twitter iyo sida boggaagu u yahay mid iyaga ka soo horjeeda. U aamina ama ha ahaato, FollowerWonk ayaa xitaa kuu sheegi kara cidda ku xigta, adiga iyo qofka aad tahay xataa kuwa ka dambeeya labadiinaba. Haddii aad shakhsi gaar ah ku aragto adiga iyo rakibahaaga, markaa waxaa jiraya fursadisaga ama iyadu waxay xiiseyneysaa suuqaaga taas oo ah qof u qalma in lala xiriiro.
Arjiga kale ee buzzmo, Buzzmo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qeexdo inta ugu badan ee la wadaago (sawirrada,videos ama blogs) bogagga warbaahinta bulshada ee tartanka. Isticmaal xogtan si aad fikrado cusub uga heshid bogaga warbaahinta bulshada.
Iska dhig inaad tahay qof isticmaalaya websaydhkaada runtii dhab ahaantii booqashada. Aqoonsiga shey ee ku qoran liiska, ku dar khariidadaada oo sii wad si aad u ogaato. Sidee u sahlanaan lahayd? Miyey qaadatay waqti dheer? Isku dayisla markaad soo gudbiso cabashooyinka / weydiimaha iyo hubi haddii website-kaagu dhaafayo adeegyadan ama haddii kale. Waxaad sidoo kale ka hubin kartaa waxa macaamiishu waa inay ka hadlaan ganacsiyadaada. Mashruuca Trustpilot waa inuu kaa caawiyaa inaad sidan u sameyso.
Xusuusin iyo suuq-geyn
Ka digtoonow iibka iyo suuqgeynta suuqgeynta ee dadka aad la wadaagto si aad u kala soocdodhaqamada gaarka ah. Nidaamka koowaad wuxuu noqon karaa inuu ku biiro wargeysyadooda si ay u helaan deeqda ugu dambeysa iyo dhiirrigelinta. Hab kale ayaa laga yaabaa inaad abuurto liis gaar ah oo Twitter ah oo loogu talagalay tartamayaasha ama Google Wargalinta si ay ugu socdaan wareegtada cusub. Tani waxay u shaqeysaa waqtiga dhabta ah.
Inkastoo inta badan isbarbardhigga lagu sameyn karo internetka, waxaa jira kiisaska qaarkoodwaxaa loo samayn karaa shaqsi offline ah. Tusaale ahaan, haddii lagugu martiqaado bandhig ganacsi ama shir, weydii qof kasta oo shakhsi ah oo ka qaybgalaya dhacdadaasaragtida adeegyadaada. Maxay tahay inay ka hadlaan tartankaaga? Isticmaal faahfaahintan iyo sidoo kale indha-indheyntaaga si aad u hagaajiso.